tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-08-17
Fitaovana iray ampiasaina amin'ny fikosoham-boalavo izay manaparitaka voninkazo rongony ho faribolana kely kokoa ho an'ny tonon-taolana, volo ary lovia. Apetraho eo anelanelan'ny nifin'ilay mpampihosin-tsofina ny nug, avy eo ahodino ny tampony sy ny ilan'ny mpitoto amin'ny lalana mifanohitra aminy mba hamotipotika ilay voninkazo. Ireo mpitrandraka zavamaniry dia mety ahitana kief ca ...
Inona no atao hoe grinder ary ahoana ny fampiasanao azy amin'ny rongony?
Grinder feno nugs (Leafly) Raha vaovao amin'ny rongony ianao dia mety manana fanontaniana vitsivitsy momba ny grinders sy ny fomba fampiasana azy io. Ny mpitroka dia azo vidiana saika any amin'ny fivarotana setroka na fivarotana loha avokoa, na afaka manafatra iray amin'ny Internet ianao amin'ny fivarotana antsinjarany isan-karazany. Izy ireo dia mety ho tsotra toy ny grinding card (l ...
Maninona no mampiasa grinder?
Ilaina ilaina amin'ny mpanao sigara voninkazo matetika ny mpitoto zavamaniry. Na mihodina ianao, manangona lovia ao amin'ny bong tianao indrindra na manisy sotro paosy, ny fikosoham-bary tsy miova dia tena ilaina amin'ny setroka tsara indrindra. Ny mpisolovava koa dia ahafahan'ny mpifoka mahazo tombony betsaka amin'ny ...
Antony 3 lehibe hampiasana grinder Herb hanamafisana ny tsimokofinao
NY MIARAKA TSARA INDRINDRA dia MANOMBOHA AMIN'NY MPITADIAVA TSARA INDRINDRA Eto akaikinay, tianay ny milaza fa "Ny fotoam-pivoriana tsirairay dia tokony hanomboka amin'ny SLX" ary izany no marina! Na aleonao mankafy ny ahitrao amin'ny bong na mivonto, fantsona na taratasy, ary indrindra raha misafidy ny hampiasa etona ianao, ny fampiasana mety ...